I- Cape clawless otter (Aonyx Capensis) ithatha igama labo kusukela ukuthi izinyawo zabo zangaphambili zijwayele ukumba futhi ngakho-ke azikho izihluthulelo. Izinyawo zazo ezinamazinyo ziyingxenye yewebhu ezinamahlumela amathathu ngezinyawo.
Ziyizinhlobo ze-otter ezazisakazwa kakhulu eningizimu ye-Afrika, zihlala kuzo zonke izinhlelo ezinkulu zomfula kanye namanzi amaningi amancane. Amanzi amasha iyimfuneko ebalulekile yokuhlala kwendawo, ngokusho kwe-A conservation assessment of Aonyx capensis, hhayi kuphela ukuphuza kodwa futhi ngoba ama-otters angenawo ungqimba wamanqamu angaphansi komzimba futhi ngakho-ke kufanele ahlanza ubuningi bawo obukhulu bokushisa.
Ama-otters angama-clawless amakhulu kakhulu, angakhula afike kumamitha amabili ubude futhi alinganisa phakathi kuka-10 kg no-21 kg. Banekhanda ubomvu obumnyama obonakala bumnyama uma bumanzi, ngezindebe ezimhlophe, izinkukhu, umphimbo, izindlebe kanye nesifuba esiphezulu kanye nezindebe ezimhlophe ezimhlophe. Imisindo yawo, engaba ngu-50 cm ubude, isetshenziselwa ukusekela lapho ihlezi emilenzeni yabo yangemuva futhi iqhubekele emanzini lapho ibhukuda.
Bamba umhlane uma behamba emhlabathini.
Ngokusho kwamaqiniso anentshisekelo mayelana neCape Clawless Otters (Aonys Capensis), ngoJared Harding, lezi zilwane ngokuvamile zizilwane ezodwa ezihlala ensimini enamaqembu omndeni angaba abantu abahlanu. Umuntu ngamunye unalo uhla lwawo lwasekhaya futhi uyazigcina kuze kube sekupheleni kwesikhathi ngoDisemba.
Cishe amaphuphu amathathu kuya kwezintathu azalwa emva kwesikhathi sokutholwa kwezinyanga ezimbili. Amaphuphu akhuliswa omama futhi ahlale naye aze afinyelele ekuvuthweni kocansi uma eneminyaka engama-ubudala. I-pups ithululwa uma ineminyaka engaba ngu-60 ubudala.
Ama-Otters aseKapa asebenza kakhulu ekuseni nakusasa, kuye ngokuthi bahlalaphi. E-Drakensberg, isibonelo, bavame ukubonakala besetshenziselwa ukudla kusukela phakathi no-ntambama, kanti basebenza kakhulu ebusuku ukuze bagweme ukuxhumana nabantu nezinja ezindaweni ezingavikelekile e-Cape Peninsula naseGauteng. Ukuzingela kungase kwenzeke nganoma isiphi isikhathi sosuku.
Bavame ukuhlala emhlanjeni omncane, njengezinhlanzi, amaqabunga, amaxoxo noma izinambuzane, kodwa zingaba yinkinga ezinkukhu noma ezindaweni zokudoba lapho zizobulala khona izilwane eziningi kunalokho ezidingekayo. AmaWundlu angase abe nesisulu se-Cape clawless otters, kanti isisulu sivame ukugubha emva kokuba impumuzo yabo igwetshiwe. Ama-otters angadla emakhaleni, ezindlebeni nasezindebeni zegundlu futhi ngezinye izikhathi futhi nesifuba.
I-Predation Management Manual ikhuthaza abalimi ukuba bavimbele ukulahlekelwa ngetambo lokucingo emamitha, kanye nokucingo kagesi okubekwe cishe ngo-45 cm emhlabathini. Ukuqasha ebusuku, ukusetshenziswa komalusi nokulonda izilwane kungasiza futhi ukugcina izilwane ezisengozini ziphephile.
Abalimi kufanele babuze ngemvume evela eziphathimandla ezifanele uma befuna ukubamba i-otter ngenjabulo. Le ncwadi ibeluleka abalimi ukuba bafake ibhola le-tenisi emgodini ukuze bahlale bematasa lapho bebanjwa futhi basize ekuvimbeleni ukulimala.